Chimwe chezvinhu zvangu zvandinoda zvekuyera uye kutsikisa yangu RSS feed kana yangu podcast kune zvemagariro media iri FeedPress. Nehurombo, iyo chikuva haina LinkedIn yekubatanidza, zvakadaro. Ndakatambanudza ruoko kuti ndione kana vaizo chiwedzera uye ivo vakapa imwe mhinduro - kutsikisa kuLinkedIn kuburikidza Zapier.
Zapier ndeye mahara kune mashoma masanganiswa uye zana zviitiko, saka ndinogona kushandisa mhinduro iyi ndisina kushandisa chero mari pazviri… kunyangwe zvirinani! Heano maitiro ekutanga:
Ah… uye ikozvino zvandiri kutsikisa ipapo, pamwe ungade kunditevera pa LinkedIn!
Tags: fudza kune linkinLinkedInlinkedin kutsikisashambadza wordpress kune linkedinrss kuinongedinpasocial media kutsikisaWordPressWordpress pluginWordpress kune yakabatanidzwaWordpress kune yakasanganiswa zapzapierzapier Wordpress plugin